Ny Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia mitaky sary | Martech Zone
Zoma, Aprily 26, 2013 Asabotsy, Jona 13, 2015 Douglas Karr
Ny herin'ny haino aman-jery sosialy dia ny fahafahan'ny mpihaino na ny vondrom-piarahamoninao hamerina ny hafatrao hanitarana ny fahatongavany. Ho an'ny mpivarotra, ny fahaiza-manao izay ilainy hofehezina dia ny fahaizana manome antoka fa mampiasa hafatra izay izy ireo miavaka. Ny fahafantarana fa ny sary dia mampitombo be ny fahafaha-mizara ny hafatrao dia midika fa ny ezaka ara-barotra amin'ny media sosialy dia tsy maintsy mampiditra sary.
Iray amin'ireo antony itiavantsika ny mpanohana anay koa izany, Depositphotos. Izy ireo dia manana safidin'ireo sary mora vidy izay azonao ampiasaina hanakanana ny fampielezana haino aman-jery sosialy.
izany sary avy amin'ny LTU manondro ny sasany amin'ireo antontan'isa mahaliana mifandraika amin'ny media sosialy sy sary. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Visual Brand Intelligence ianao dia ampidino ny whitepaper anay Fampiroboroboana marika amin'ny taonan'ny sary.
Tags: sarysary ao amin'ny twittersary media sosialysary twitter
Lahatsary: ​​Tsena toa an'i Beyonce (NSFW)